जनप्रतिनिधिहरुलाई अनुरोध – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७५ भाद्र २२, शुक्रबार ०७:१७ गते
देशको वर्तमान सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएर देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढिरहेको यहाँहरुलाई सर्वविदितै छ । सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न देशको यस वर्तमान परिस्थितिमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिज्यूहरुले आफ्नो नगर/गाउँका जनताको समस्या र गुनासाप्रति त्यति चासो राखेको देखिँदैन । जनप्रतिनिधि भैसकेपछि जनताको साथ लिएर नगर/गाउँको विकास र समस्या न्यूनीकरण गर्न अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचमा विकास भएको पनि देखिँदैन । जनप्रतिनिधिले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले जस्तो अफिसमा बसेर यसो गर्नुस् उसो गर्नुस्, यस्तो लिएर आउनुस् उस्तो लिएर आउनुस् भन्ने मात्र होइन । जसरी भोट माग्न घरघर, खेतखेत र आलीआली पुग्नुभएको थियो, त्यसैगरी जनताको घरघर गएर जनताका गुनासा सुन्ने गर्नुपर्छ । हरेक शनिबार बिहान २–४ घन्टा घर विभाजन गरेर जनताका समस्या सुनिदिने बानी गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
आफ्नो नगर/गाउँमा भएका केही गरौँ भन्ने आकांक्षा भएका युवाहरुलाई साथ लिएर समग्र क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि छलफल गर्नुहोस् । समय–समयमा आर्थिक व्ययभार नलाग्ने केही चेतनामूलक कुराहरु सिकाउँदै हिँड्नुहोस् । उदाहरणका लागि चुनावको समयमा जस्तै प्रत्येक घरघर पसेर घरवरिपरि फोहोर नगर्नुस्, सफा राख्ने गर्नुस्, म अर्कोपटक आउँदा सफा हुनुपर्छ भन्दिनुस्, त्यो घरवरिपरि सधैँ सफा हुनेछ । जनप्रतिनिधिप्रति जनताको विश्वास, माया र आस्था हुन्छ । त्यस्ता जनता छन्, जो जनप्रतिनिधि घरमा आउँदा पनि हर्षित हुन्छन् । त्यस्ता जनताको मुहारमा खुसी छर्ने काम गर्नुस् । एकपटक हरेक घरमा गएर सोध्नुस् त तपाईंका समस्या के के छन् भनेर, अनि उनीहरुका अनुहार पढ्नुस् । जनताका चाहना कति सरल र कति आवश्यकीय लाग्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुहुने छ ।
तपाईं डुल्नुस्, आफ्नो नगर/गाउँभित्रका कुनाकुनाका सडकमा र सडकका खाल्डा पुर्न पहल गर्नुस् । कति नै खर्च लाग्ला र ग्राभेलले खाल्डा पुर्न ! श्रमदान गर्न इच्छुक युवा समूह र टोलवासीलाई अनुरोध गर्नुहोस्, ग्राभेल सम्मिने छ । सम्याएपछि रोलर लगाइदिनुस्, सडकको समस्या समाधान हुने छ । गर्न इच्छाशक्ति निकाल्नुहोस्, सजिलै सकिन्छ । तर, इच्छाशक्ति नै छैन भने विभिन्न बहाना बनाएर उम्किने प्रयासमात्र हुनेछ ।
आफ्नो वार्डको फोहोर समयमा उठे/नउठेको कहिल्यै हेक्का राख्नुभएको छ तपाईंहरुले ? जनताले आफ्नो काम गर्ने हो र जनतालाई सुविधा तपाईंहरुले दिने हो । यो काम गर्न त बजेट चाहिँदैन नि !
के गर्नुहुन्छ तपाईंले जनताका लागि ? आआफ्नो पार्टीको आस्था भएको व्यक्ति बोकेर उनीहरुका स्वार्थको काममात्र गरेर देश समृद्ध हुँदैन । विपक्षी दलका व्यक्तिसँग प्रतिशोध साधेर न देश बन्छ, न समाज नै सुध्रिन्छ ।
तपाईंले मेरो वार्डमा कति अपांगता भएका व्यक्ति छ्न र कसरी जीवनयापन गरेका होलान् भनेर कहिल्यै बुझ्नुभएको छ ? मेरो वार्डमा कति बालबालिका स्कुल जानबाट वञ्चित छन् भनेर कहिल्यै महसुससम्म गर्नुभएको छ त ? मेरो वार्डमा मेरा जनता जातीय विभेदको शिकार भएका त छैनन् भनेर बुझ्नुभएको छ कहिल्यै ? सामाजिक विषयमा जनतालाई खुसी दिन बजेट चाहिँदैन जनप्रतिनिधिज्यूहरु ।
नगर/गाउँभित्र रहेका हरेक इच्छुक युवाहरुलाई स्वयंसेवकका रुपमा परिचालित गरेर सँगै डो¥याएर बिनाबजेट पनि धेरै चेतनामूलक कार्यहरु गर्न सकिन्छ । समाज रुपान्तरण र विकास असारमा बाटोमा कालो टालो हालेरमात्र हुँदैन । जनताको प्रतिनिधि भैसकेपछि दलको पट्टी फुकाएर काम गर्न सम्पूर्ण स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिज्यूहरुलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु । -john1feb@gmail.com